Abazali abaningi bakuthola e izimpawu ingane yabo ye umkhuhlane, iwe cishe ngo isidumo. Ngakho izisebenzi ambulensi avele izindaba mayelana nendlela umama osemusha ubabiza ebusuku ngenxa umkhuhlane ezinsaneni nezinye izizathu ezincane. Ingabe ukuqonda, kufanele aphathwe kunokuba lutho ukwethuka ngaphansi kwaziphi izimo kanye nalokho odokotela.
Polyclinic, ambulensi, ambulensi - yini umehluko?
Lapho izingane ezigulayo, abanye abazali nje abakwazi ukucabanga ngokunengqondo. Kunengqondo, oluphuthumayo kanye ambulensi - kuyahambisana. Ayikwazi knock phansi womntwana lokushisa 38 degrees - udinga ukudayela 03! Ezinye alazi ukuthi kukhona inkonzo ezifana eziphuthumayo yezingane. Nokho isimo nzima yokuthi kusukela eseyingane zizonke zifundisa ukuthi uma ungakwazi ukuya emtholampilo noma udokotela ukubiza ekhaya ngenxa yanoma yisiphi isizathu, lapho-ke kudingeka ukubiza i-ambulensi, ikakhulukazi uma sikhuluma ingane. Empeleni akunjalo.
Isevisi ye-ambulensi ukunakekelwa ngezokwelashwa (Ambulensi Station) kanye "ambulensi" - izikhungo ezimbili ezahlukene nezinhloso ezehlukene, basuke cishe axhumene, ngaphandle yokuthi kukhona, kanti odokotela abasebenza khona. Umehluko omkhulu - e eziphuthumayo kanye nokuphuthuma. Uma isevisi lokuqala kufanele ubangele lapho kukhona usongo okuseduze sina baphile futhi babe nempilo, amadili yesibili cishe lafananako yezimo wezingane wendawo.
Okusho ukuthi, uma ingane imikhuhlane isikhathi eside, conjunctivitis, ukuhlaselwa amagciwane, noma yimuphi omunye isimo ukuthi akudingi kokungenela esiphuthumayo yezokwelapha, usizo noma udokotela wesifunda ezivela emtholampilo, eziphuthumayo yezingane. Kulokhu, kubalulekile kuphela lokho usuku kanye nesikhathi zokwelashwa usuku ezidingekayo - ngezinsuku zeviki ekuseni, kufanele ushayele udokotela wezingane.
Ngakho, umehluko phakathi kwento eziphuthumayo medical aid yezingane Ambulensi Station, kusobala. Endabeni ka bathola ukulimala okunzima, izinkinga ukuphefumula noma nokulahlekelwa ukwazi nezinye izimo sibi, lapho lo mthethosivivinywa eya imizuzu namasekhondi Yiqiniso, udinga ukudayela 03. Lokho ambulensi izofika ngemva kwemizuzu engu-20, kodwa odokotela "ambulensi" Ngeke ezisheshayo - angene ngaphakathi amahora noma ngisho kamuva. Uma kudingeka, odokotela bangathola ukuthi isicelo ilivu yokugula (njengoba kuqhathaniswa esiphuthumayo, okungadingi ukwenza), kanye ukubhala nokudluliselwa kwazo esibhedlela, ukuthi nje ukuya esibhedlela banezidingo zabo.
ukunakekelwa okuphuthumayo Pediatric eMoscow ihlobene eduze imitholampilo yezempilo, izinselele uya odokotela efanayo. Inombolo kungenziwa njalo atholakala inkomba emtholampilo endaweni langempela lokuhlala noma, njengendlela yokugcina Uma kwenzeka, dispatcher eziphuthumayo. Ngayinye yalezi amasevisi isifunda esiphethe zabambalwa, kodwa udinga ukusebenzisa ukusebenza ukusungulwa wezokwelapha, okuyinto unamathele ingane, noma nje ezinsukwini ezizayo.
By endleleni, uma, udokotela akudingeki, wena angashaya ucingo nje uthintane. ukunakekelwa okuphuthumayo Pediatric usebenzela lo.
Eminyakeni yamuva, ne intuthuko kwimikhakha kwezentengiselwano umkhakha kwezempilo ezibhedlela ezinkulu kukhona ngumnikazi amasevisi eziphuthumayo nokunakekela esiphuthumayo. Kulabo ukuwabuka kusuka odokotela esikhokhelwayo njalo noma iba umshuwalense wezempilo yokuzithandela, okubandakanya izinhlelo ezinjalo, kungase kubonakale siyindlela elula kakhudlwana. Abanye nje baba nokuzethemba okwengeziwe odokotela, uma ikhokhwe. Othile ecabanga ukuthi amasevisi commercial beye basiza ngokuyimpumelelo. Omunye kungaba phikisana, kodwa uma udinga usizo oluphuthumayo izingane, ungacabangi kabili - udinga ushayele udokotela.
2 ppm utshwala - kungcono kangakanani utshwala usegazini?
Usizo lokuqala for ubuthi
Clafoutis: zokupheka kanye nezinhlobo
New laseSiberia Islands kumephu. qoqo leziqhingi
Salo ngesi-Ukraine: zokupheka
Ceiling fan - indlela zakudala Ukupholisa